Brain Plugins: Ntinye iji Nwee Nrụpụta Ọrụ | Site na Linux
Emechaa 2 gara aga posts na Ngwa Brain, nke lekwasịrị anya melite arụpụtaghị nke ndị ọrụ na kọmpụta ha, anyị ga-akwụsị na nke atọ a mbipụta iji mee ka ọhaneze mara nke ọma site na iji kacha mma plugins arụnyere na dị na ya.
O kwesiri icheta ma mesie ya ike na obu ezie na Ngwa Brain nwere Afọ 2 na-enweghị mmelite, ọ na-enye ndị nwere ihe ọmụma dị mkpa ohere, mepụta plugins nke gị ma kesaa ha na ndi mmadu ka ị gaa n'ihu na-abawanye ikike nke ngwa ahụ.
Taa, dị ka ngalaba na plugins nke Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Cerebro na GitHub Enwere ugbu a plugins ndị a maka naanị iji ya na ojiji maka izugbe:
1 Nanị ojiji ngwa
1.1 Naanị sistemụ arụmọrụ MacOS
1.2 Naanị sistemụ arụmọrụ Windows
1.3 Naanị na Sistemụ Ọrụ Linux
2 General nzube Plugins
3 Mgbakwunye Brain
Nanị ojiji ngwa
Naanị sistemụ arụmọrụ MacOS
ụbụrụ-osx-kọntaktị: Ejiri iji mee ka njikwa ozi banyere ngwa kọntaktị OS
ụbụrụ-osx-kọwaa: Eji ya mee ka njikwa ihe omuma banyere ngwa osususu OS
Brain-osx-ọpụpụ: Ejikwa jikwaa ngwa ngwa nke os n'igwe
usoro-osx-system: Ejiri jikwaa akpaaka nke ụfọdụ atụmatụ nke sistemụ OS
ụbụrụ-iterm: Ejiri iji mezuo ogbugbu Shell ọ bụla site na nyocha, dị ka a ga - asị, site na ngwa ngwụcha (njikwa) nke os
Naanị sistemụ arụmọrụ Windows
ụbụrụ-bụ-ihe niile-ngwa mgbakwunye: Eji ya mee ka ị chọọ data na ozi iji ngwa niile sitere na Voidtools. Ihe niile bụ ihe nchọta desktọọpụ maka Windows nke nwere ike ịchọta faịlụ na folda ngwa ngwa site na aha.
ụbụrụ-windo-usoro: Ejiri jikwaa akpaaka nke ụfọdụ atụmatụ nke sistemụ OS
ụbụrụ-windo-shei: Ejiri iji mezuo ogbugbu Shell ọ bụla site na nyocha ọchụchọ, dị ka a ga - asị na ọ bụ, na ngwa ngwụcha (njikwa) nke os
Naanị na Sistemụ Ọrụ Linux
ụbụrụ-Linux-usoro: Ejiri jikwaa akpaaka nke ụfọdụ atụmatụ nke sistemụ OS
njikwa-window-njikwa: Ejiri iji depụta windo ngwa mepere emepe ma tinye ha na ihu ma ọ bụ mechie ha.
General nzube Plugins
Ndia bu aha ndi ngwa ngwa eji eme ihe maka izugbe ma ọ bụ maka ụwa niile, nke ahụ bụ, enwere ike iji ha na OS ọ bụla arụnyere:
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ihe ọ bụla na arụ ọrụ dị iche iche. Agbanyeghị, maka ndị ọrụ ahụ anaghị enye Ngwa Brain banyere ha GNU / Linux Distros ma ọ bụ na ha adịghị amasị ya, e nwere ezi ihe ma dị mfe ọzọ dị ka ọla kọpa y Albert.
Dị ka ugbu a, m na-eji Ngwa Brain gbasara m GNU / Linux Distro, na-enweghị nsogbu, ya mere, ana m akwado iji ya pụọ ​​na mgbakwunye abụọ pụrụ iche maka "Linux" (ụbụrụ-Linux-usoro y ụbụrụ-njikwa faili), Ihe mgbakwunye 10 a kpọtụrụ aha n'okpuru maka ojiji ndị a, ụfọdụ n'ime ha etinyegoro na ndabara:
Google: Iji chọọ weebụ na ihe nchọgharị ahụ nke ndabara.
Faịlụ NavIji nweta ihe ngosi nke faịlụ gosipụtara mgbe ị na-agagharị n'okporo ụzọ OS
Ntụgharị: Iji mee mgbanwe ntụgharị na ego (ego) ntụgharị na arụmọrụ mgbakọ na mwepụ.
Mepee Web: Iji ihuchalu a mesịa URL. Dabere na web enyoba, o nwere ike ọ gaghị eweta ya akara ngosi (favicon / logo).
Chọta ebe a: Iji inyocha faịlụ usoro si search mmanya.
Ịsụgharị: Performrụ nsụgharị si asụsụ dị iche iche na English si search mmanya.
Shell: Iji mezuo iwu ha n’okporo ụzọ ha zuru oke nke na-amalite ngwa eserese ma ọ bụ iwu ọnụ, ma nke dị mfe ma dịkwa mgbagwoju anya, nke na-eme ka ọ dị mma iji nwalee iwu Shell Scripting site na Desktọpụ ahụ.
IP: Iji lelee adreesị ntanetị anyị ahazi na ntanetị ntanetị site na nyocha ọchụchọ.
Win: Iji weta windo windo ụfọdụ nke ngwa ọ bụla na-arụ ọrụ ugbu a.
Cryptocurrency: Iji jiri anya nke uche hụ uru na nha anya nke ọtụtụ n'ime kriptoptoyos ugbu a nke Blockchain Ecosystem.
Na nkenke, dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ plugins ndị ọzọ bara uru enwere ike iji ya, mana ụfọdụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ afọ ojuju na a Desktọpụ Environment ma ọ bụ GNU / Linux Distro na-ezipụta. Agbanyeghị, enwere ngwa mgbakwunye akpọrọ «Onye nyere iwu"nke na-enyere mepee arụmọrụ, dị ka iwu ndabara iwu rụọ ọrụ ụfọdụ, nke na-enye ngwa ahụ ọtụtụ mgbanwe.
Anyị na-atụ anya na nke atọ a na nke ikpeazụ "bara uru obere post" banyere «Cerebro», gosi na o doro anya na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ma na-arụ ọrụ emeghe iyi na cross ikpo okwu ngwa, nnọọ uru iji melite anyị arụpụta ihe n’elu tebụl kọmputa anyị; ma ya mere, di ọtutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Brain Plugins: Ntinye iji mee ka arụ ọrụ
SpaceX: were astronauts banye mbara iji Linux
PeerTube 2.2 biara na ndozi ibubata faịlụ diyo, bulite vidiyo, onodu ihe omuma na ndi ozo